Imandarmedia.com.np: अब कफी खाइसकेपछि पैसा हैन मात्र चुम्बन दिनुहोस् ! छैन त गजब ?
Interesting, Interesting News » अब कफी खाइसकेपछि पैसा हैन मात्र चुम्बन दिनुहोस् ! छैन त गजब ?
अब कफी खाइसकेपछि पैसा हैन मात्र चुम्बन दिनुहोस् ! छैन त गजब ?
मेट्रो सेन्ट जेम्स – सिड्नीको एक फ्रेन्च थिम्ड क्याफे विगत एक महिना अगाडि मात्र सञ्चालनमा आएको हो तर यो कम समयमा भएपनि निकै लोकप्रिय बनेको छ । यसको लोकप्रियताको मुख्य जड भनेको सरल प्रचारको माध्यम–कफी खाइसकेपछि पैसाको सट्टा चुम्बन दिने– लाई मान्नै पर्ने हुन्छ ।
ठट्टा गरिएको होइन । जुन महिनाका लागि जो मानिसले बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म कफी खान्छन् भने उनीहरुले उक्त कफी खाइसकेपछि पैसा नभई चुम्बनको माध्यमबाट चुक्ता गर्न सक्छन् । ‘हामीहरुले रोमान्सलाई फेरी ल्याएका छौँ । आफ्नो पार्टनरलाई हाम्रो क्याफेमा बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेभित्रको समयमा ल्याउनुहोस् र कफी अर्डर गरिसकेपछि किसले आश्चर्य बनाउनुहोस् ।
हामी तपाईंहरुको पैसा स्विकार गर्दैनौँ, मात्र तपाईंको चुम्बन, ’ उक्त क्याफेको फेसबुक पेजमा लेखिएको छ । मेट्रो क्युट प्रोमोसनल भिडियोमा एकजना वेटरका अनुसार,‘हामी तपाईंहरुलाई हेरिरहेका हुन्छौँ । यो चुम्बन साँचो हुनुपर्दछ, मायाले भरिएको चुम्बन । यदि चुम्बन झुटो भएको खण्डमा म थाहा पाइहाल्छु । म एक प्रकारको विशेषज्ञ नै हो भन्दा पनि हुन्छ, त्यसकारण नो चिटिङ ।’